Anagoo kale ah oday dhaqameedyada Beesha Warsangeli Harti-Abgaal Mudulood ee Qabiilka Hawiye waxaan si isku duuban u caleemo saarnay inuu xubinteena Baarlamaan nagu matalo xildhibaan C/Qaadir Cosoble Cali. Waxaana u gudbinay go’aan keenkaas Imaam Maxamed Yuusuf, waxaase nasiib daro ah in Madax weyne Sheikh Sharif uu diiday codeyntii iyo doorashadii oday dhaqameedyada Warsangeli asagoo ku dhaliilayo...
Kulan ay xildhibaanada Baarlamaanka DFKMG ku yeesheen xarunta Golaha Shacabka ee Muqdisho maanta (Arbaca Janaayo 4, 2012) ayaa baarlmaanku ku doortay guddoomiye cusub oo ah Xildhibaan Madoobe Nuunow Maxamed. Xildhibaanada soo xaadiray madasha shirka ayaa cod u qaaday musharaxiintii xilkaas isu sharaxay oo tiradoodu ahayd 6 musharax, codbixin kaddib waxaa xilka ku guulaystey guddoomiyaha cusub Xildhibaan...
iyo Shariif Xasan oo ka soo horjeestey go’aankii baarlamaanku xilka kaga qaaday…. Sidaas waxa uu ku sheegay waraysi ay la yeelatay idaacadda codka Maraykanka. Waxa kale oo Shariif Xasan sheegay in uusan arkin warsaxaafadeedkii uu go’aanka baarlamaanka ka soo saaray madaxweynaha DFKMG. Halkan Ka Dhegeyso Waraysiga Shariif Xasan (VOA) Xildhibaan Cumar Islow Oo Ciidamada Ammaanka...